Isivumelwano Sabanikeli: Yini okudingeka uyazi? | Law & More B.V.
Blog » Isivumelwano Sabanikeli: Yini okudingeka uyazi?
UMBHANGANO WOMTHETHO WOMHLABA
Isivumelwano Sabanikeli: Yini okudingeka uyazi?
Kunezici eziningana zokuba nengane ngosizo lomnikeli wesidoda, njengokuthola umnikeli ofanele noma inqubo yokufaka isidoda. Esinye isici esibalulekile kulo mongo ubudlelwano obusemthethweni phakathi kweqembu elifuna ukukhulelwa ngokusebenzisa inzalo, noma yibaphi abalingani, umnikeli wesidoda nengane. Kuyiqiniso ukuthi isivumelwano sabanikeli asidingeki ukulawula lobu buhlobo obusemthethweni. Kodwa-ke, ubudlelwano obusemthethweni phakathi kwamaqembu buyinkimbinkimbi ngokomthetho. Ukuvikela izingxabano ngokuzayo nokuhlinzeka ngesiqiniseko kuwo wonke amaqembu, kuwukuhlakanipha ukuthi wonke amaqembu angene esivumelwaneni sabanikeli. Isivumelwano sabanikeli siqinisekisa nokuthi izivumelwano phakathi kwabazoba ngabazali nabaxhasi besilisa zicacile. Zonke izivumelwano zabanikeli ziyisivumelwano somuntu siqu, kodwa isivumelwano esibalulekile sawo wonke umuntu, ngoba naso siqukethe izivumelwano mayelana nengane. Ngokuqopha lezi zivumelwano, kuzoba nokuncane ukungavumelani mayelana neqhaza lomnikeli empilweni yengane. Ngaphezu kwezinzuzo isivumelwano sabanikeli esingazinika bonke abathintekayo, le bhulogi ilandelana ngokulandelana ukuthi idingani isivumelwano sabanikeli, yiluphi ulwazi olushiwo kuso nokuthi yiziphi izivumelwano zikakhonkolo ezingenziwa kuso.
Siyini isivumelwano sabanikeli?
Isivumelwano sabanikeli noma isivumelwano somnikeli siyinkontileka lapho kubhalwa khona izivumelwano phakathi kwabazali (abazali) kanye nomnikeli wesidoda. Kusukela ngo-2014, izinhlobo ezimbili zokunikela ziye zahlukaniswa eNetherlands: ukunikela ngo-B no-C.
B-ukunikela kusho ukuthi umnikelo wenziwa ngumnikeli womtholampilo ongaziwa kubazali abahlosiwe. Kodwa-ke, lolu hlobo lomnikeli lubhaliswa imitholampilo ngeFoundation Donor Data Artificial Fertilization. Ngenxa yalokhu kubhaliswa, izingane ezikhulelwayo kamuva zinethuba lokuthola imvelaphi yakhe. Lapho ingane ekhulelweyo ifinyelele eminyakeni eyishumi nambili, ingacela imininingwane ethile eyisisekelo ngalolu hlobo lomnikeli. Imininingwane eyisisekelo iphathelene, ngokwesibonelo, ukubukeka, ubungcweti, isimo somndeni nezici zezinhlamvu njengoba kushiwo umnikeli ngesikhathi somnikelo. Lapho ingane ekhulelweyo ifinyelele eminyakeni eyishumi nesithupha, ingacela futhi (enye) imininingwane yomuntu yalolu hlobo lomnikeli.
C-ukunikela, ngakolunye uhlangothi, kusho ukuthi kuthinta umnikeli owaziwa ngabazali abahlosiwe. Lolu hlobo lomnikeli imvamisa umuntu ovela kumbuthano wabangane noma abangane babazali abazoba ngabazali noma umuntu otholwe ngabazali ngokwabo online. Uhlobo lokugcina lomnikeli nalo lungumnikeli esivamise ukuphothulwa naye izivumelwano zabaxhasi. Inzuzo enkulu ngalolu hlobo lwabanikeli ukuthi abazali abahlosiwe bayamazi umnikeli ngakho-ke izici zakhe. Ngaphezu kwalokho, alukho uhla lokulinda futhi ukufaka isidoda kungaqhubeka ngokushesha. Kodwa-ke, kubalulekile ukwenza izivumelwano ezinhle kakhulu ngalolu hlobo lwabanikeli nokuzirekhoda. Isivumelwano sabanikeli singanikeza ukucaciswa kusengaphambili uma kwenzeka kuba nemibuzo noma ukungaqiniseki. Uma kungake kube khona icala, isivumelwano esinjalo sizokhombisa ukubheka emuva ukuthi izivumelwano ezenziwayo ukuthi abantu bavumelane yini nokuthi izinhloso amaqembu ayenazo ngesikhathi sokusayina isivumelwano. Ukugwema ukungqubuzana kwezomthetho nokuqhutshwa komnikeli, ngakho-ke kuyalulekwa ukuthi ucele usizo lwezomthetho kummeli kusenesikhathi enkambisweni yokulungiselela isivumelwano sabanikeli.
Yini eshiwo esivumelwaneni sabanikeli?
Imvamisa okulandelayo kubekwa esivumelwaneni sabanikeli:
Igama nekheli lemininingwane yomnikeli
Imininingwane yegama nekheli lalabo abazoba ngabazali
Izivumelwano mayelana nokunikelwa kwesidoda njengobude besikhathi, ukuxhumana nokuphathwa
Izici zezokwelapha njengokucwaninga ngamaphutha wefa
Imvume yokuhlola imininingwane yezokwelapha
Noma iziphi izibonelelo. Lokhu kuvame ukuba izindleko zokuhamba nezindleko zokuhlolwa kwezempilo kwalowo onikelayo.
Amalungelo nezibopho zomnikeli.
Ukungaziwa namalungelo wobumfihlo
Isibopho sezinhlangothi zombili
Okunye ukuhlinzekwa uma kwenzeka ushintsho esimweni
Amalungelo nezibopho zomthetho maqondana nengane
Uma kukhulunywa ngengane ekhulelweyo, umnikeli ongaziwa imvamisa akanayo indima esemthethweni. Isibonelo, umnikeli akakwazi ukuphoqelela ukuthi ngokusemthethweni abe ngumzali wengane ekhulelweyo. Lokhu akuliguquli iqiniso lokuthi ezimweni ezithile kusalokhu kungenzeka ukuthi lowo onikelayo abe ngumzali wengane ngokusemthethweni. Ukuphela kwendlela yokuthi umnikeli abe ngumzali osemthethweni ukuqaphela ingane ezelwe. Kodwa-ke, imvume yalowo ozoba ngumzali iyadingeka kulokhu. Uma ingane ekhulelisiwe isivele inabazali ababili abasemthethweni, akunakwenzeka ukuthi umnikeli abone ingane ekhulelwe, noma ngabe enemvume. Amalungelo ahlukile kumnikeli owaziwayo. Kuleso simo, isibonelo, uhlelo lokuvakasha kanye ne-alimony nakho kungadlala indima. Ngakho-ke kuwukuhlakanipha ngabazali abangaba ngabazali ukuxoxa nokuqopha amaphuzu alandelayo nomnikeli:
Ukukhulisa ngokomthetho. Ngokuxoxa ngalesi sihloko nomnikeli, abazali abazoba khona bangakugwema ukuthi ekugcineni bamangazwe iqiniso lokuthi umnikeli ufuna ukwamukela ingane ekhulelisiwe njengeyakhe ngakho-ke ifuna ukuba ngumzali wayo osemthethweni. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ubuze umnikeli kusengaphambili ukuthi angathanda yini ukwamukela ingane kanye / noma agcinwe. Ukugwema ukuxoxisana ngemuva kwalokho, kuwukuhlakanipha ukurekhoda ngokusobala okuxoxiwe phakathi komnikeli nabazali abahlosiwe ngaleli phuzu esivumelwaneni sabaxhasi. Ngalo mqondo, isivumelwano sabanikeli siphinde sivikele ubuzali obusemthethweni babazali / abazali abahlosiwe.
Oxhumana Nogada. Le ngenye ingxenye ebalulekile efanele ukuxoxwa kusengaphambili yilabo abazoba ngabazali nomnikeli esivumelwaneni sabanikeli. Ngokuqondile, kungahlelwa ukuthi ngabe kuzoba nokuxhumana phakathi kwalowo onikela ngesidoda nengane. Uma kunjalo, isivumelwano sabanikeli singacacisa nezimo lapho lokhu kuzokwenzeka khona. Ngaphandle kwalokho, lokhu kungavimbela ingane ekhulelweyo ukuthi ingafuneki (ngokungafuneki). Ngokwenzayo, kukhona umehluko ezivumelwaneni ezenziwa ngabazali nabanikela ngesidoda komunye nomunye. Umuntu oyedwa onikela ngesidoda uzoxhumana nengane nyangazonke noma ngekota, kanti omunye umnikeli wesidoda ngeke ahlangane nengane aze abe neminyaka eyishumi nesithupha. Ekugcineni, kukuumnikeli nalabo abazoba ngabazali ukuthi bavumelane ngalokhu ndawonye.
Ukuxhaswa kwengane. Lapho kushiwo ngokusobala esivumelwaneni sabanikeli ukuthi umnikeli unikela ngenzalo yakhe kuphela kubazali abahlosiwe, okungukuthi akukho okunye ngaphandle kokuyenza itholakalele ukukhulelisa okwenziwe ngomuntu, umnikeli akudingeki akhokhe isondlo sezingane. Ngemuva kwakho konke, kuleso simo akayona i-causative agent. Uma kungenjalo, kungenzeka ukuthi lowo onikelayo abonwe njenge-causal agent futhi aqokwe njengobaba osemthethweni ngesenzo sikababa, ozophoqeleka ukuthi akhokhe isondlo. Lokhu kusho ukuthi isivumelwano somnikeli asibalulekile kuphela kubazali / kubazali abahlosiwe, kodwa nakanjani nakumnikeli. Ngesivumelwano sabaxhasi, umnikeli angafakazela ukuthi ungumnikeli, okuqinisekisa ukuthi lowo (abazali) abazoba khona ngeke bakwazi ukufuna isondlo.
Ukuqamba, ukuhlola noma ukulungisa isivumelwano sabanikeli
Ngabe usunayo isivumelwano sabanikeli futhi ngabe zikhona yini izimo esezishintshile kuwe noma kumnikeli? Khona-ke kungaba ukuhlakanipha ukulungisa isivumelwano sabanikeli. Cabanga ngokuhamba okunemiphumela kuhlelo lokuvakasha. Noma ushintsho kumholo, okudinga ukubuyekezwa kwe-alimony. Uma ushintsha isivumelwano ngesikhathi futhi wenza izivumelwano ezisekelwa yibo bobabili amaqembu, wandisa amathuba empilo ezinzile nenokuthula, hhayi eyakho kuphela, kodwa neyengane.
Ingabe izimo zihlala zinjalo kuwe? Nalapho kungahle kube ukuhlakanipha ukuthi isivumelwano sakho somnikeli sihlolwe nguchwepheshe wezomthetho. Ngo- Law & More siyaqonda ukuthi zonke izimo zehlukile. Kungakho sithatha indlela yomuntu siqu. Law & MoreAbameli bangabachwepheshe bezomthetho wezomndeni futhi bangabuyekeza isimo sakho nawe futhi banqume ukuthi ngabe isivumelwano sabanikeli sikufanele yini ukulungiswa.
Ungathanda ukwenza isivumelwano sabanikeli ngaphansi kokuqondiswa ngummeli onguchwepheshe wezomthetho womndeni? Noma kunjalo Law & More ilungele wena. Abameli bethu bangakunikeza futhi usizo lwezomthetho noma iseluleko uma kwenzeka kuba nempikiswano phakathi kwabazali abahlosiwe nomnikeli. Ngabe uneminye imibuzo ngalesi sihloko? Sicela uxhumane Law & More, sizojabula ukukusiza.
Thumela Previous Ukudluliswa Kokwenza
Post Next Ikhipha isinqumo ngecala lesimo sezulu elibhekene noShell
Ifomu lithunyelwe. Ngiyabonga.
Uhla lwamagama Business
E. [i-imeyili ivikelwe]